SomaliTalk.com » Dacwada Soomaaliya iyo Dowkii Sh. Cabdulqaadir Nuur Faarax – VIDEO
Muuqaal taariikheed (Documentary) kan wuxuu ka hadlayaa dowrkii dacwada Soomaaliya uu kulahaa Sh. Cabdulqaadir Nuur Faarax oo ahaa caalim si wayn looga yaqaanay geeska Afrika iyo Caalamkaba. Sidoo kale wuxuu ka hadlayaa sidii loo dilay Sheikha, cidii dishay, sababtii loodilay iyo ehelka Sheikha oo arintaan markii ugu horaysay sharxaya.
Wuxuu ka kooban yahay Muuqaal taariikheed kan dhowr qaybood fadlan lasoco qaybaha kale ee Documentary-ga. Lasoco Qaybta 2-aad
Qaybta 1aad DAAWO VIDEO: